Globe in dwg - Geofumed
Ogast, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Faylkan wuxuu ka kooban yahay globe oo leh muuqaal lagu rakibay wax alaab ah. Waxaa markii hore lagu daabacay bogga Shaan Hurley.
Sidee bay u sameeyeen?
Waxay abuureen sheyga 3D
Kadibna waxay abuureen wax cusub oo ku salaysan sawirkan
Kadibna waxay u adeegsadeen sida qalab loo adeegsado, oo qeexaya qiyaasta cylindrical. Si aad u aragto waa inaad codsataa aragtida ra'yiga ah.
Xaaladdan waxaan ku furay Microstation XM sababtoo ah sababo la yaab leh ayaa sameeyay in AutoCAD 2009 daba joogtay ... Waxaan u maleynayaa in xasuusta laptop-kayga iga codsanayo fitamiin ... waxay u muuqataa inay ku dhacday Shaan. Laakiin maaha arrin, waxay u egtahay xiiso.
Laga soo bilaabo halkan waxaad soo dejisan kartaa faylasha la fureen oo ay ku jiraan laba faylasha dwg iyo laba sawir oo tan iyo aragti kale oo habeenkii ah.
Post Previous«Previous GeoShow, oo ah Google Earth
Post Next Maalin ka mid ah Nolosha GeofumaadasNext »